နေအိမ် » ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ
ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ | SActivator.com
sactivator.com ငါတို့သည်သင်တို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏ privacy ကိုအရေးကြီးသောကြောင်းအသိအမှတ်ပြုရန်. ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ခံယူခြင်းနှင့်သင်အသုံးပြုသည့်အခါစုဆောင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏အဘယျသို့အမျိုးအစားများအပေါ်သတင်းအချက်အလက် '' သည်sactivator.com'' ငါတို့သည်အဘယ်သို့သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုကာကှယျစောငျ့ရှောကျ.
အကြှနျုပျတို့သညျကြှနျုပျတို့၏ website သွားရောက်ကြသောအခါကြော်ငြာဝတ်ပြုဖို့ Third-party ကြော်ငြာကုမ္ပဏီတွေကိုသုံး. အဆိုပါကြော်ငြာပိုကောင်းတဲ့ဧည့်သည်ရဲ့ဦးစားပေးနားလည်သူတို့နှင့်ဆက်စပ်ကြော်ငြာတွေဖော်ပြရန်ကိုကူညီဖို့ကြော်ငြာကုမ္ပဏီတွေကအသုံးပြုစေခြင်းငှါအရာ cookies တွေကိုဆံ့စေခြင်းငှါ. သို့သော်, ထိုကြော်ငြာများနှင့်အတူလက်ခံရရှိသော cookies တွေကိုကြော်ငြာကုမ္ပဏီအားဖြင့်စုဆောင်းကောက်ယူကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းသတင်းအချက်အလက်မှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး. ဤရွေ့ကားကုမ္ပဏီတွေသတင်းအချက်အလက်သုံးနိုင်ပါသည် (သင်တို့၏နာမအပါအဝင်မဟုတ်, လိပ်စာ, အီးမေးလိပ်စာ, သို့မဟုတ်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်) သငျသညျမှကုန်ပစ္စည်းများနှင့်အကျိုးစီးပွားန်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်. ကြော်ငြာများကိုပေးနိုင်ရန်အတွက်ဒီနှင့်အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များရန်သင့်လညျပတျအကြောင်း.
အကြှနျုပျတို့သညျကြှနျုပျတို့၏ website သွားရောက်ကြသောအခါကြော်ငြာဝတ်ပြုဖို့ Third-party ကြော်ငြာကုမ္ပဏီတွေကိုသုံး. ဤရွေ့ကားကုမ္ပဏီတွေသတင်းအချက်အလက်သုံးနိုင်ပါသည် (သင်တို့၏နာမအပါအဝင်မဟုတ်, လိပ်စာ, သို့မဟုတ်အီးမေးလ်လိပ်စာ) သငျသညျမှကုန်ပစ္စည်းများနှင့်အကျိုးစီးပွားန်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်. ကြော်ငြာများကိုပေးနိုင်ရန်အတွက်ဒီနှင့်အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များရန်သင့်လညျပတျအကြောင်း. သင်ဤအလေ့အကျင့်နှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုသိရှိလိုပါကချင်ပါတယ်နှင့် ဆက်စပ်. ၌သင်တို့၏ရွေးချယ်မှုများသိရန်လိုပါလျှင်·အဲဒီကုမ္ပဏီတွေကအသုံးပြုသောဤအချက်အလက်ရှိခြင်းမဟုတ်.
သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီအကြောင်း Watch Video